Saldhig ciidanka Itoobiya leeyihiin oo lagu qaaday weerar madaafiic ah+Khasaarah | Somalia News
Saldhig ciidanka Itoobiya leeyihiin oo lagu qaaday weerar madaafiic ah+Khasaarah
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan weerar madaafiic loo adeegsaday oo Xubno ka tirsan dagaalamayaasha Ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhiga Ciidamada Itoobiya ku leeyihiin degmada Qansax-dheere ee Gobolka Baay.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in Saldhiga Ciidamada Itoobiya ee Qansax-dheere lagu weeraray in ka badan 7 Hoobiye, kuwaas oo jugtooda laga maqlay Xaafadaha kala duwan ee degmada qansax-dheere ee gobolka Baay.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Itoobiya dhankooda ay tiro madaafiic ah ugu jawaabeen Ururka Al-Shabaab, isla markaana uu jiro khasaaro madaafiicda kasoo gaaray dad rayid ah.
Dadka ku nool degmada Qansax-dheere ee Gobolka Baay ayaa waxaa ay sheegeen inay cabsi soo wajahday, kaddib hoobiyeyaasha ay degmadaasi isku weeydaar sadeen Al-Shabaab & Ciidamada Itoobiya, arrintaasi oo ah mid soo lab laabatay.
Maamulka degmada Qansaxdheere iyo laamaha Amniga degmadaasi weli kama hadlin weerarkaas, hayeeshee dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale Al-Shabaab ay madaafiic ku weerareen Saldhigyada Ciidamada Itoobiya ku leeyihiin degaano ka tirsan gobolka Baay.
Previous articleEthiopia: Security forces killing unarmed peaceful protesters
Next articleSouth Sudan: Advice to Sant’Egidio-mediated peace process
Philippe Coutinho Oo Ku Dhawaa In Uu Ku Biiro Arsenal & Qofkii Ka Hor Istaagay Oo La Ogaaday.
Xiddiga kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho ayaa ku dhawaa in uu ku biiro kooxda Arsenal ka hor intii uuna Tababare Ronald Keoman si shaqsi ah xiddiga uga hor istaagin in uu ku biiro Arsenal. Coutinho ayaa wadahadalo kula jiray kooxda Gunners kadib markii uu amaah kula qaatay kooxda Bayern Munich. Arsenal ayaa ku dhawayd in ay dhamaystirto saxiixa xidiga ka hor intii ayna Barcelona tababare u magacaabin Ronald Koeman kaas oo xiddiga ku qanciyay in uuna ku biirin Arsenal. Xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay kooxda Barcelona kulamadii uu u ciyaaray kooxda.
Sargaal Ciidan oo caawa lagu dilay Muqdisho iyo Wararkii u dambeeyay dilal kale oo dhacay
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp - Advertisement - Kooxo biskoolado ku hubeesan ayaa caawa abaaro salaadii Maqrib Sargaal katirsanaa ciidanka milatariga Soomaaliya waxa ay ku dileen waaxda Kurdamac oo katirsan degmada Dayniile. Sida aan wararka ku helnay dhalinyaro biskoolado ku hubeesnaa ayaa gudaha garaash uu lahaa sargaalkan oo ahaa labo Xidigle lagu magacaabayay Xuseen Sheekh Muxumad (Xuseen Sandheere) ku dilay xili uu salaada Maqrib u weeso qaadanayay. Kooxdii dilka geesatay ayaa la sheegay in goobta si deg deg uga baxsadeen, waxaana dilka kadib halkaasi gaaray ciidamo katirsan booliiska iyo Nabad sugida kuwaa oo ku guul dareestay soo qabashada ragii dilka geestay. Dilkan caawa ka dhacay Degmada Dayniile ayaa noqonaya kii afaraad oo 24-saac gudahood ka dhaca gudaha Dayniile, waxaana dilalkan noqonayaan kuwii ugu badnaa oo saacado gudahood ka dhacay Dayniile oo kamid aheyn goobaha ugu nabdoon Muqdisho. Xafiiska Shabakada Allbanaadir.comMuqdisho [email protected] - Advertisement - Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Previous articleTartanka Kubada Cagta Degmooyinka gobolka Banaadir oo maanta furmay (Sawirro)
Frank Lampard Oo Xaqiijiyay Laba Xiddig Oo Chelsea Ka Maqnaan Doona Kulanka Man United.
Tababaraha Kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa shaaca ka qaaday in Kepa Arrizabalaga uu seegi doono kulanka Chelsea iyo Man United ka dib markii uu dhaawac garabka ah soo gaadhay. Kepa ayaa bilaabay kulankii ay Chelsea barbaraha 3-3 la gashay Southampton, kulankoodii ugu dambeeyay ee Premier League, ka hor inta uusan booskiisa u waayin saxiixa xagaaga Edouard Mendy kaas oo ku bilowday kulankii Sevilla ee Champions League. Blues sidoo kale waxaa ka maqnaan doona Billy Gilmour, kaasoo wali ka soo kabsanaya dhaawac jilibka ah. Markii la weydiiyay walaaca dhaawaca Chelsea shirkiisii ​​jaraa’id ee ciyaarta ka hor, Lampard ayaa yidhi”Thiago Silva iyo Pulisic labaduba way fiicanyihiin, waxa aan haysanaa koox buuxda marka laga reebo Kepa oo garabka ka dhaawacan kaas oo aan kooxda la safri doonin”. “Xiddiga kale ee maqan waa Billy Gilmour”ayuu lampard sii raaciyay.
DEG DEG: Dal kale oo Carab ah oo ogolaaday inuu xiriir la sameysto Israel
Updated on October 24, 2020 3:46 am